Môskea - Wikipedia
Ny môskea na môske no toeram-pivavahana ivorian' ny Miozolmana hanatanterahana ny vavaka iraisana. Teo anelanelan' ny taonjato faha-7 sy faha-16 no tena namipirobo ny fanamboarana môskea. Hodidinin' ny tilikambo (arabo: منارة / manara na مئذنة / mi’dhana) maro ny trano mamorona ny môskea, miendrika andohalambo ny tafony. Ao amin' ny iray amin' ireo tilikambo ireo no anaovana ny mouadh-dhin (arabo: مُؤَذِّن : fiantsoana amin' ny feo avo ny mpino hivavaka) mandritra ny adhan (arabo: أذان).
Ny môskea Al-Nabawi ao Medina, any Arabia Saodita
2 Fampiasana ny môskea
2.1 Karazana môskea
2.2 Fampiasana ny môskea
Ny teny frantsay hoe môsquée no nohagasina hoe môskea. Io teny frantsay io dia avy amin' ny endrika italianan' io teny io hoe moschea, izay avy amin' ny endrika espaniôlan' io teny io hoe mezquita, izay avy amin' ny teny arabo hoe مسجد / masjid (izay midika ara-bakiteny hoe "toeram-piakohofana"), izay avy amin' ny teny arameana hoe masged, izay avy amin' ny fototeny prôtô-semitika izay midika hoe "mametraka ny handrina amin' ny tany".
Fampiasana ny môskeaModifier
Samihafa ny habe sy ny endriky ny moskea, ka misy:
ny môskea madinika (atao hoe مسجد / masjid), dia ny môskean' ny vakin-tanàna, anaovana ny vavaka andavan'andro, sy
ny môskea lehibe na môskean' ny Zoma (atao hoe مسجد الجَامِع / masjîd al-jâmi‘ na جَامِع / jami’ fotsiny, izay ivavahana isaky ny andro Zoma.
Tsy toeram-pivavahana fotsiny ny môskea fa andry ara-piarahamonina sy ara-panabeazana koa: mety hahitana madrasa, trano famakiam-boky, ivontoeram-piofanana, na oneversite koa aza. Toeram-pihaonana sy fifanakalozana eo amin' ny fiarahamona koa ny ao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môskea&oldid=1001823"
Dernière modification le 28 Febroary 2021, à 15:25
Voaova farany tamin'ny 28 Febroary 2021 amin'ny 15:25 ity pejy ity.